प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्किएलगत्तै किन जाँदैछन् परराष्ट्रमन्त्री चीन ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्किएलगत्तै किन जाँदैछन् परराष्ट्रमन्त्री चीन ?
बैशाख ३ गते, २०७५ - १२:१४
काठमाडाैं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पाँचदिने भ्रमणका लागि आज चीन प्रस्थान गर्दैछन् । उनी राति ११ बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । चीन उड्नुअघि मन्त्री ज्ञवालीले दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन् ।
ज्ञवालीको यो भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारीका रूपमा लिइएको छ । उनको भम्रणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमणका विषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ ।
केहि समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोली भारत भ्रमण गएका थिए ।
बैशाख ३ गते, २०७५ - १२:१४ मा प्रकाशित